Ukubandakanya iifoto ze-Instagram ezonyuswe ngokuzibandakanya nge-imeyile 7x | Martech Zone
Ukubandakanya iifoto ze-Instagram ezonyuse i-imeyile yokuzibandakanya i-7x
NgoMvulo, Oktobha 19, 2015 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
In Imeko yoRhwebo oluBonakalayo, isifundo esenziwe ngu Indawo kwaye i Umbutho weNtengiso ye-Intanethi, Kuphela yi-8% yabathengisi abakholelwa kakhulu ukuba basebenzise imifanekiso ukuqhuba ukuzibandakanya kwe-imeyile.
I-76% ye-imeyile ibandakanya amaqhosha eendaba ezentlalo kodwa yi-14% ye-imeyile kuphela ebandakanya imifanekiso yezentlalo.
Isithembiso santlandlolo seendaba zosasazo yayikukukwazi ukwenza iimveliso ezinobuhlobo ngakumbi kunye nabathengi bazo. Oku kwenza ukuba iinkampani zingeneke kwaye zithembeke. Yidibanise loo nto nokukhula okuqhushumbayo kwemifanekiso kwimidiya yoluntu, kwaye ayothusi into yokuba ukudibanisa imithombo yeendaba kunye nomfanekiso unamandla. Yongeza oku ukutyhala umyalezo kubathengi bakho, kwaye unokuba nje ungene kwinto ethile!
Xa ujonga iimveliso eziqale ukusebenzisa imifanekiso ye-Instagram ngaphakathi kwee-imeyile, izibonelelo zicacile. Umthengisi omnye wempilo, umzekelo, uhambise i-7X yokuphakamisa ukubandakanya iifoto zemveliso kwiwebhusayithi yabo kwiiyure ezingama-24 emva kokuthumela i-imeyile yabo yokuqala efakwe kwi-Instagram.
Ukuhlala kunye I-Ink ehambayo wenza oku kulandelayo, I-Instagram + I-imeyile: Uthando lwangoku.
tags: I-curalateimeyile nezentlaloi-imeyile kunye nemidiya yoluntuinstagramI-instagram infographicUmbutho wentengiso yeintanethiinki eshukumayoyentlalo kunye ne-imeyileimidiya yoluntu kunye ne-imeyileurhwebo olubonakalayo
Izinto ezili-10 eziBalulekileyo zeMveliso yokuSebenza eyiMveliso